Meghan Markle, xiddigga carruurnimada: Meghan Markle doorkeedii ugu horreeyay ee shaashadda ah ee shaashadda ah - ayaa la muujiyey - WAA KU SAABSAN SAACADA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Meghan Markle, xiddigga carruurnimada: Meghan Markle doorkeedii ugu horreeyay ee shaashadda ah shaashadda - ayaa la muujiyay
Meghan Markle ku simaha mihnadiisa waxay u muuqan kartaa sidii xasuus fog, laakiin inta aysan guursan Prince Harry Mareykanku wuxuu caan ku ahaa ciyaarista Rachel Zane ee Riwaayadaha sharciga ah ee Suits . Si kastaba ha noqotee, wadada guusha waxay ahayd mid dheer oo bilaabatay markii Meghan ay ahayd dhalinyaro - sawirro duug ah ayaa muujinaya muuqaalkeedii ugu horreeyay ee TV-ga markii ay ahayd da'da 13.
Duchess of Sussex waxay dadaal badan gelisay sidii ay ku heli lahayd halka ay maanta joogto. Kahor intaanu soo dejin doorkiisii ​​xiddigihii Suits.
Haddii lagu daydo ahaan ahaan barnaamijka Ciyaaraha Mareykanka ama No Deal ciyaarta ama muuqaallada filimaannada ay ka mid yihiin Horjoogayaasha xunxun, wadada guusha ma aysan fududaan.
Meghan wuxuu ku guuleysan lahaa wadarta guud ee '37 000' dhacdo kasta oo Suits ah marka la eego dhererkiisa.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Meghan Markle M & S: Dharka 19,50 £ ee khadadka Meghan's Marks & Spencer Line
Xiddigii carruurnimada Meghan Markle: Meghan waxay ahayd jilaa dheeraad ah oo jilaaga da'da ah ee '13 sitcom' (midig) (Sawirka: GETTY / TNI)
Si kastaba ha noqotee, waxay ku bixisay nafteeda jacaylkeeda ficil. xiddigta ayuu xidhnaa Amiir Harry oo hadda naftiisa u huray sadaqadda
Waxa dad badani aysan ogayn ayaa ah in muddo dheer kahor Suits Meghan ay noqotey mid dheeri ah oo ku saabsan "Aroos lala yeesho Caruurta".
Duchess-ka mustaqbalku wuxuu ahaa oo keliya 13 markii ay qaadatay doorka "Ka fadhiisiga Ardayga ee Marxaladda" ee taxanaha 1995.
Qeybta ay ka soo muuqatay waxaa la oran jiray 'The Undergraduate' iyo goobta uu Meghan ka soo muuqday waxaa lagu qabtay kubada dugsiga sare.
In kasta oo Meghan aan lagu qiimeynin doorka ama buundooyinka bandhigga ayaa ahayd tillaabada ugu horreysa ee loo qaado stardom.
Meghan wuxuu ku guuleystaa doorka maxaa yeelay aabaheed, Thomas Markle, wuxuu ahaa agaasime sawir qaadista majaajillada waqtigaas.
Sawirada goobta ayaa muujinaya aktarada da'da yar ee saaxiibbada la cayaareysa. iyo ku fadhiista masraxa u dhexeeya saaxiibbada fasalka.
Waxay sidoo kale sawir laga qaadayaa safka hore ee xiddigta ugu weyn ee qaybta.
Meghan Markle, xiddigga carruurnimada: Meghan (bidix) muuqaalka guduudan ee kubbadda goobta (Sawirka: TNI)
Xiddigii carruurnimada Meghan Markle: Meghan (kan labaad dhanka midig) looma aqoonsan doorkeeda (Sawirka: TNI)
Meghan Markle, xiddigga carruurnimada: Meghan (midigta midig) ayaa ku guuleysata doorka mahaddeeda leh aabaheeda (Sawirka: TNI)
Meheradda meheradda Meghan waxay ka dhigtay nin milyaneer ah muddo dheer ka hor inta aysan la kulmin Prince Harry. 19659004] The Mirror ayaa sheegay in Mrs. Markle ay kasbatay 5 milyan oo rodol oo qalin ah ka hor inta aysan isguursan qoyska boqortooyada Ingiriiska.
Meheradda Meghan ma ahayn waxa keliya ee ay ku khasbanayd in ay ka tanaasusho markii ay ku xidhnayd amiir Ingiriis ah. 19659004] Duchess wuxuu ahaa nin ku raaxeysta qaab nololeed wuxuuna socodsiiyay degelkeeda - The Tig
Xiddigii carruurnimada Meghan Markle: Meghan ayaa mar dambe soo saari doonta door xiddigeed ku habboon Suits (Sawirka: GETTY)
Tig wuxuu ku baaba'ay 2017 kahor guurka Meghan Au Prince Harry.
Qoraal dhaqaajin ah oo lagu dhajiyay goobta, Meghan wuxuu qoraa: "Wixii ku billowday mashruuc xamaasad leh (matoorkeyga yar oo sameyn kara) wuxuu u rogay bulsho cajiib ah dhiirigelin, taageero, madadaalo iyo nal fudud. .  "Waxaad maalmahayga ka dhigtay mid ifaya oo ka buuxsamay khibradaas farxad aad u badan.
"Sii wad raadinta daqiiqadahaas ee helitaanka Tig, sii wad qosolka oo halista u sii wado, oo sii wad inaad noqoto isbedelka aad doonayso inaad ku aragto adduunka. "